Top 8 Things To Do in Tijuana
8 Zavatra atao any Tijuana
Inona no tokony hatao any Tijuana?
Street Market any Tijuana. Veronica Garbutt / Getty Images
Tijuana dia tanàn-dehibe, maoderina ary malaza. Ny toerana ao amin'ny zorony ambony any Meksika, eo amin'ny sisin-tanin'i Etazonia atsimon'i San Diego no mahatonga azy ho toerana malaza ho an'ireo mpitsidika androany izay te- hopitaly manerana ny sisintany mba hahazoany loko Meksikana, mihinana sakafo matsiro, ary Manaova fanatanjahantena alohan'ny hivezivezena. Saingy ireo izay te-handany fotoana bebe kokoa dia hahita fa ny Tijuana dia manana zavatra maro ankoatra ny fanararaotan'ny mpizahatany. Ireto ny sasany amin'ireo zavatra tianay indrindra hankafizinay ao Tijuana sy manodidina.
Mandehana any Avenida Revolución
Ny Revolution Avenue, fantatry ny mponina ao amin'ny "La Revu", dia ny lozisan'ny fizahantany ho an'ny mpizahatany any Tijuana, ary eo an-tongotra lavitra ny sisin-tanin'i Etazonia. Raha te-hividy zavatra mahatsikaiky ianao, mividy sombrero lehibe ary ento miaraka amin'ny ampondra misy ny zana-tsipìkanao amin'ny zebra misy azy, izany no toerana ho azy.
Saingy aorian'io dia tokony hijery ny sasany amin'ireo toeram-pivarotana, trano fisakafoanana ary trano fandraisam-bahiny ianao izay hitanao amin'ny alàlan'ity bala ity. Tsy misy t-shirts, paositaly, ary fivarotana zava-mahadomelina izay mampivarotra fanafody mora vidy. Ho hitanao koa ny firavaka volafotsy, ny asa tanana tsara tarehy manerana ny firenena, ary ny fivarotana boutique mivarotra karazan-tsarimihetsika rehetra.
Tsidiho ny tsena mahazatra
Ankoatra ny fanandramana maoderina, afaka mitsidika tsena mahazatra Meksikana ianao. Misy vitsivitsy manodidina ny Tijuana, fa ny Mercado Hidalgo no mipetraka indrindra. Eto ianao dia mahita voankazo voankazo, voankazo, ary zavatra maro avy any atsimo sy afovoan'i Meksika. Azonao atao ny mikarakara sakafo amin'ny sakafo, alao sary fanao mahazatra Meksikana mahazatra ary mivadika ho fahatsiarovana.
Explore the Tijuana Cultural Centro
Jan Butchofsky / Getty Images
Hahafantatra ny Foibe ara-kolontsaina Tijuana ianao amin'ny alalan'ilay tranoben'ny sehatra manokana. Ilay anarana hoe "La Bola" ho an'ny endriny, ny trano baolina dia trano IMAX. Anisan'ny sehatra ara-kolontsaina koa ny sehatra iray ary ny habaka fampirantiana kibika, ary ny Museo de las Californias izay mifanila aminy dia manana fampisehoana maharitra ny tantaran'ny faritra tamin'ny vanim-potoana talohan'ny vanim-potoana hatramin'izao, ary koa mampiseho fampisehoana vonjimaika isan-karazany ny lohahevitra. Misy hetsika ara-kolotsaina maromaro izay natao tao amin'ny ivon-toerana ara-kolotsaina isan-kerinandro, noho izany dia mendrika hijerena azy io ny mijery ny zava-misy mandritra ny fitsidihanao.
Jereo ny Bullring teo amin'ny ranomasina
Plaza Monumental de Toros, Tijuana. David Peevers / Getty Images
Ny sasany no miantso azy io ho endrika fanehoana zavakanto, maro no milaza fa endrika mahatsiravina amin'ny fanararaotana biby. Tsy ny olon-drehetra ihany no misy ny herisetra, ary misy antso mba handrara azy io ho fomba amam-panao ratsy sy tsy misy dikany. Ity fomban-drazana ity dia nentina avy tany Espana tamin'ny taonjato faha-16 ary nanjary nalaza tany Meksika, indrindra tany avaratry ny firenena. Ny Kaongresin'i Baja California State dia nandinika ny volavolan-dalàna handrarana ity hetsika ity, saingy mandritra ny fotoana fohy, raha te-hahita ity fampisehoana nentim-paharazana ity ianao (izay azo antoka fa isaina ny isany), dia afaka manatri-maso ny Fiesta Brava ao amin'ny Plaza Monumental de Tijuana, fantatra amin'ny hoe Anglisy toy ny famonoana amin'ny ranomasina, matetika amin'ny Mey ka hatramin'ny Septambra.
Azonao atao ihany koa ny mahita ny trano fanorenana, izay afaka mahita olona maherin'ny 20 000, no laharana fahatelo lehibe indrindra eran-tany ary ohatra iray amin'ny tontolon'ny Postclassic tamin'ny taona 1960. Manana toerana miavaka ihany koa izy, amin'ny ranomasina ary manerana ny Rindrina sisintany Etazonia.
Mamy ny sakafo Meksikana sasany
Courtesy of Caesar's Restaurant Bar
Tijuana dia nanjary sakafo foodie tao anatin'ireo taona faramparany. Na dia afaka mankafy ny arabe sy ny tsena mahazatra aza ianao, dia misy safidy maro azo atao, na tradisionna na ankehitriny.
Maro no milaza fa ny salady cesar dia noforonin'ny chef Cesar Cardini tao Tijuana, ary ny Restaurant Caesar ao Caesar dia toerana hahafahanao mankafy ny fomba amam-panao voalohany, miaraka amin'ireo maro hafa avy any Meksikana sy iraisam-pirenena. Na azonao jerena ny fisehoan-tsakafon'i Tijuana eo amin'ny sasany amin'ireo trano fisakafoanana vaovao sy zava-baovao izay manompo an'i Baja-Med Cuisine, miaraka amin'ireo akora sy tsiro avy any Baja California miaraka amin'ireo avy any Mediterane sy Azia. Mitadiava ny Chef Restaurant Miguel Angel Guerrero El Colegio ao amin'ny Avenida Revolución. Na tsidiho ny chef Javier Plascencia amin'ny sakafo Baja California ao amin'ny trano fandraisam-bahiny 19 miorina ao Zona Río, distrikan'ny business district ao Tijuana.
Ho an'ny traikefa an-kalamanjana bebe kokoa, fitsidihana ny Telefónica Gastro Park dia mendrika. Ity dia kamiao ahafahan'ny kamiao ahafahanao manonona labiera vita amin'ny tanana sy sakafo matsiro ao anaty atiny.
Jereo ny Plaza Santa Cecilia
Ny Plaza Santa Cecilia dia iray amin'ireo kianja tranainy indrindra any Tijuana ary hita ao amin'ny Calle Primera sy Avenida Revolución. Ny andohalambo malaza maoderina izay maneho ny tanànan'i Tijuana ary maneho ny fifandraisana eo amin'i Meksika sy Etazonia, mifanohitra amin'ireo arivoarivo nentim-paharazana ao ambadiky ny sehatry ny kianja. Ny fandehanana manodidina ity faritra ity dia manome anao fahatsapana ho an'i Meksikana nentim-paharazana sy ny mety ho an'i Tijuana. Ilay mozika mpiaro ny mozika, Saint Cecilia, dia nanome ity toerana ity ny anarany. Misy fampisehoana mahazatra sy dihy manomboka eto. Raha tsara vintana ianao, dia hahita mariachis maromaro ianao , na mozika dihy folk folk manome fandaharana.
Hitety ny Beach
Tijuana dia manana tora-pasika manokana, fa raha te-handany andro iray mankamin'ny masoandro sy fasika ianao, dia mendrika ny handehanana mandeha amin'ny antsasak'adiny mankany amin'ny Rosarito Beach, tanàna amoron-dranomasina malaza kely any atsimo amin'ny morontsiraka. Tsy toerana ho an'ny toeram-pitsangatsanganana mangina izany, fa afaka manana fotoana mahafinaritra mankafy ny trano fialan-tsasatry ny seafood, fametrahana margaritas na micheladas , ary milalao amin'ny surf.
Manao dia an-tongotra amin'ny Valle de Guadalupe
Tsy lavitra an'i Tijuana ny toeran'ny divizina any Meksika , ary raha manam-potoana ianao dia tsy maintsy miverina mankany amin'ny Valle de Guadalupe hijery ny sasany amin'ireo tanimboaloboka. Ny varimbazaha maherin'ny 150 no mamokatra manodidina ny 90 isan-jaton'ny divay Meksikana ary iray amin'ireo faritra tena maniry mihamitombo manerana izao tontolo izao. Mandany ny andro fametrahana ny mena manintona, mahatsikaiky ny tontolo iainana maniry, ary misakafo amin'ny afobe mafana sy tacos.
Mankanesa any amin'ireo tanàna meksikanina avy any amin'ny faritra Atsimo Andrefana
Ny mofomamy tropikaly avy any Meksika dia tokony hiezaka daholo ny mpitsidika
Historic Attractions at Miami
Top Resaka Huatulco
Inona no tokony hatao ao Meksika
Mazatlán, Mexico Gay Guide and Photo Gallery
Toeram-piarovana sy toeram-pialam-boly ao Albuquerque
Trano mora amin'ny Bar C ao amin'ny The Stratosphere
Ireo 9 hotely tsara indrindra any Brussels tamin'ny taona 2018
Gypsy Las Vegas - NISY
Ny kamiao sakafo dia miverina any Little Rock
Olaimpikan'i Rio Amin'ny Numbers
Top Attractions & Attractions in Belgium
Torolàlana momba ny fitsidihana an'i Pau any amin'ireo Pyrénées any amin'ny faritra atsimon'i Frantsa
The 7 Best Water Water Parks Near Milwaukee
Tomatina Tomato Fight Guide
Toeram-pisakafoanana tsy mahazatra indrindra any Londres
Hearst Castle Lodging Tips
Dress and Dresses Prom Dresses on Long Island, NY